Carleton University - Study na Canada. Education Abroad Magazine
Carleton University Nkọwa
Echefukwala atụle Carleton University
Idebanye aha na Carleton University
Nsogbu na a mara mma campus n'ókè site na-egbuke Rideau River na Canal, Carleton bụ nnọọ nkeji si n'obi nke na anyị na mba ọchịchị na-arụ mfe ohere ka ọtụtụ òtù, mkpakọrịta na ulo oru nke na-amụba na Ottawa. Ọtụtụ n'ime Ontario si eduga elu eji ụlọ ọrụ gburugburu anyị campus ebe ọnwụ ihu nnyocha enyekwara na ukwuu otutu ozizi na-edozi mere eme nsogbu. Òtù nke a ike, research-kpụ ọkụ n'ọnụ mahadum, Carleton si ngalaba na mkpara na-enye a elu mmụta ahụmahụ anyị ezi ụmụ akwụkwọ ndị ji ọṅụ n'eto si ọ bula anāchi achi na n'aka n'elu 100 mba gburugburu ụwa.
Carleton-enye 65 mmemme nke ọmụmụ na ebe nnọọ iche dị ka ọha na eze omume, oru ndi, film ọmụmụ, engineering, elu uzu na nke mba ọmụmụ. Karịrị 2,000 amamiihe ọkachamara na ndị ọrụ mejupụtara a iche iche ma raara onwe ya nye ìgwè na-eje ozi 28,000 ụmụ akwụkwọ. Carleton ji kee, interdisciplinary na mba na obibia research emewo ka ọtụtụ ịrịba nchoputa na ọrụ okike na sayensị na nkà na ụzụ, azụmahịa, oha, ọha na eze iwu na nkà.
Ụmụ akwụkwọ bụ n'ezie VIPs na Carleton campus na-enwe obi na-atụrụ ndụ mmemme nakwa dị ka a dịgasị iche iche nke omenala na-elekọta mmadụ omume. Nyere okwu-eme ka ndị ọkà okwu nke ụwa aha anyị campus na mbọhọ ka obodo na-eme ka o kwe omume na-enwe ụwa-klas ihe na National Arts Centre na ọtụtụ ngosi ihe mgbe ochie na veranda gafee obodo.
Faculty of Arts na Social Sciences Homepage
Center maka Initiatives na Education (agụnye atọkwu Support Program)
College nke Humanities (agụnye Bachelor nke Humanities, Gris na Rom Studies (n'oge gara Ochie), Religion)
Department of English Language na Literature
Department of Geography na Environmental Studies
Department of Sociology na Anthropology
Institute maka Comparative Studies in Literature, Art na Culture
Institute nke akpịrị Science
Institute of interdisciplinary Studies (agụnye Child Studies, Eduzi interdisciplinary Studies, Human Rights)
Pauline Jewett Institute of Women na Gender Studies
School maka Studies na Art na Culture (agụnye Art History, film Studies, music)
School of Linguistics na Language Studies
Faculty of Engineering na Design
Faculty of Engineering na Design Homepage
Department of Civil na Environmental Engineering
Department of Mechanical na Aerospace Engineering
Department of Systems na Computer Engineering
Azrieli School of Architecture na Urbanism
Faculty of Ukpep na Postdoctoral Affairs
Department of Iwu na Legal Studies
Institute of Mpụ na Criminal Justice
Institute of European, Russian, Yurop, nakwa Studies
School of Journalism na Nkwurịta Okwu
School of Public Policy na Administration
Institute of n'ihi mmiri ọgwụ
Carleton University nke mgbọrọgwụ dị ka a na-abụghị denominational mahadum akwado akụkụ site nyere onyinye si Ottawa obodo-eme ka ọ pụrụ iche n'etiti Ontario mahadum. hiwere na 1942, Carleton e kere omume mkpa iji nyere aka ịnye ndị na-eto eto na Ottawa, ndị ọtụtụ n'ime ha weere na ọrụ ịnagide nrụgide nke Iduọ Ndutịm Uforo, ohere nọgide na ha ịga akwụkwọ.
Si ya umeala mmalite na Ottawa Mbụ Avenue, Carleton ebiliwo ghọọ a ike nnyocha na izi alụmdi na a ọdịnala Mfịn, na-adọrọkwa mgbanwe. taa, na mahadum na-anọdụ karịa 100 acres, on a saịtị n'etiti Rideau River na Rideau Canal, dị nnọọ mkpirikpi anya si ogbe ndịda Ottawa.
The mahadum na-enye ihe ndị magburu onwe mmụta na ahụmahụ ya karịa 24,000 full- na akụkụ-oge ụmụ akwụkwọ na Undergraduate na gụsịrị akwụkwọ na-etoju. Ya karịa 875 agụmakwụkwọ mkpara na-ghọtara mba maka ha mfọn na ọnwụ onu nnyocha karịa 50 ọzụzụ.
Carleton aha e wuru na ya na-eme na ubi nke oru ndi, ọha na eze na-eme, International Affairs, ije na elu uzu. Ya ụmụ akwụkwọ na-erite uru site na interdisciplinary, ifịk, aka-na obibia ozizi na-eme nnyocha na-eme site na ya ngalaba òtù na nke ọtụtụ amụma mmekọrịta mahadum nwere na gọọmenti etiti, ọzọ mahadum na onwe oru mmekọ.
Ị chọrọ atụle Carleton University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Carleton University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Carleton University.